Inona no fomba tsara indrindra hahitana ireo teny fototra Amazon?
Raha toa ianao ka mitantana ny raharaham-barotra amin'ny Amazon, dia tena ilaina ny manao fikarohana lalindalina momba ny teny fototra. Ny teny fikarohana tsara kokoa hitanao, ny ambony kokoa no hizaranao amin'ny Amazon SERP sy ny fifamoivoizana organika izay tianao hisarihana. Ny fametrahana ny fotoananao hanombanana ny teny fikarohana indrindra ao amin'ny nichanao dia afaka mampitombo ny tanjaky ny orinasanao ary manangana ny toeram-pivarotana ho anao amin'ny teny fanao indrindra amin'ny Amazon. Na izany aza, tsy ampy fotsiny ny mahita ny mety amin'ny fikarohana momba ny orinasa; Mila mampiasa azy ireo koa ianao. Amazon dia manome anao izany fahafahana izany.
Misy fizarana telo farafahakeliny ahafahanao mampiditra ny teny fanalahidy tarihanao - lohateny, famaritana sy bala. Ireo singa ireo dia tena ilaina amin'ny fahaiza-manao hafa, fa ny lafiny manan-danja indrindra sy tsy misy dikany amin'ny lisitra dia ny lohatenin'ny vokatra. Izy io no manana fahefana manana lanjany indrindra ho an'ny lisitra. Raha manana adiresy manan-danja ianao dia ahafahanao mizara fanontaniana maro. Azonao atao ny manonona ny lisitry ny vokatra miaraka amin'ny lohatenin'ny vokatra lava sy teny fototra ao Amazon. Amin'ny ankapobeny, ireo lohateny toy izany dia tsara kokoa amin'ny Amazonia raha oharina amin'ny azy ireo. Eto isika dia afaka mahita fahasamihafana goavana eo amin'ny lafiny Amazonia sy Google momba ny fanatsarana. Raha ao amin'ny Google ny lohateninao dia tokony ho marina ary ambarao ny hevitrao voalohany amin'ny tranonkala, ao amin'ny Amazon ny lohateninao dia manolotra fampahalalana betsaka momba ny vokatra araka izay tratra. Ny mpampiasa dia tsy voatery ho toy ny sazy lava be, fa ny Amazon A9 algorithm dia mety hahita ny lanjany amin'izany. Noho izany, amin'ny lohateny manan-danja manan-danja, ny vokatrao dia hampidirina amin'ny teny filamatra samihafa.
Na dia mila lohateny lehibe aza ianao, izany dia antsasaky ny ady. Raha te hahatratra ny laharana ambony amin'ny fikarohana rehetra tadiavina ianao, dia tsy maintsy asehon'ny lisitra ny fivarotana mba hampisehoana Amazonia fa ny lisitry ny vokatrao dia tena manan-danja amin'ny fikarohana. Izany no antony horesahantsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fanaovana fikarohana amin'ny teny mazika amin'ny fomba matihanina ary mametraka ny lisitry ny Amazon-nao amin'ny fomba mahomby araka izay tratra..
Amazon keyword research and listing optimization
Araka ny antontan'isa momba ny statistika, ny ampahatelon'ireo fikarohana rehetra dia manomboka amin'ny sehatra varotra Amazon. Tena sehatra feno sy feno fifaninanana izy io ary misy vokatra an-tapitrisany maro. Izany no mahatonga azy io tsy toerana tsara indrindra hijerena sy hitadiavana vokatra vaovao. Hitady ambaran'i Amazon ny valiny avy hatrany amin'ny fanontana amin'ny lisitr'ireo vokatra tena ilaina sy mety. Izany no antony maha-zava-dehibe ny miseho eo an-tampon'ilay lisitra rehefa mitady ny mety ho fehezanteny mifandraika amin'ny vokatrao ianao.
Fepetra fototra maromaro dia afaka manampy anao hifantoka amin'ny valim-pikarohana ao Amazon, anisan'izany ny habetsahana sy ny hatsaran'ny hevitrao, ny tantara momba ny varotra Amazon, ny isan'ny fifanarahana tsara, ny fanamarihan'ny kintana, ny fanohanan'ny mpanjifa, ary ny maha-zava-dehibe ny vokatrao dia ny fikarohana. Na dia mitaky fotoana sy ezaka goavana aza ny ankamaroan'ireo lafiny ireo, ny fanatsarana ny lisitry Amazon-ko dia afaka eo ambany fanaraha-maso avy hatrany.
Ahoana ny fikarohana ireo teny fanalahidy ho an'ny lisitry ny fanatsarana ny Amazon?
Misy fomba vitsivitsy ahitana ny teny fototra tokony hapetraka ao anatin'ity lisitra ity mba hampitomboanao ny maha-zava-dehibe ny fangatahana fikarohana mahazatra indrindra.
Misy fomba roa ahafahanao manao fikarohana lalandava - manonta sy automatique. Ny endriny farany no tena ampiasaina amin'izao androntsika izao satria mamonjy fotoana be dia be izy ary manome ny valiny marina indrindra amin'ny fikarohana ara-tsosialy sy ny fifaninanana.
Izany no antony hanoroako anao hisafidy ny rindrambaiko matihanina matihanina amin'ny fanatanterahana tsara ny fanentanana fanentanana Amazon. Avy amin'ny fitaovana fikarohana fototra mahomby indrindra, azoko sokitra ireto manaraka ireto: Google Keyword Planner, Amazon Keyword Planner sy Jungle Scout Source .